Global Voices teny Malagasy » Zavatra 8 Tianao Ho Fantatra Momba An’i Madagasikara Saingy Tsy Sahinao Nanontaniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Septambra 2014 14:06 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika (en) i Savannah Goyette, miora
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Fampandrosoana, Hehy, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Zazavavy Malagasy, sary an'i Hery Zo Rakotondramanana ao amin'ny Flickr. CC BY-SA 2.0
Madagasikara no nosy fahefatra goavana indrindra eran-tany eo amin'ny habe , kanefa mbola zava-miafina ho an'ny maro izy. Tato ho ato dia nifantoka taminy ny sain'ny olona noho ny fitsidihan'i Valérie Trierweiler , mpiara-miasa taloha tamin'ny filoham-pirenena Frantsay François Hollande ary mpanoratra ilay boky nahalafo be indrindra “Merci pour ce moment” (Misaotra anao noho ity fotoana ity), Madagasikara dia manitikitika noho ny fahasamihafan'ny zavaboariny sy ny fipetrahany ho mpampifandray an'i Azia sy Afrika.
Araka izany, raha mikarakara ny fitsidihanao voalohany an'i Madagasikara ianao, ka te-hahafantatra ny tanindrazan'ireo namanao, na koa te-hahalala fotsiny io faritra iray amin'izao tontolo izao io, ireto misy zavatra valo mety nampanontany tena anao mikasika an'i Madagasikara saingy tsy sahinao nanontaniana. Avy amin'ireo olom-pirenena Malagasy izay mandray anjara mavitrika ao anaty aterineto ireto valinteny ireto—jereo ny bilaogin'izy ireo sy ny lahatsariny.
1) Ho any Madagasikara tsy ho ela aho ary te-hanana hevitra tsara kokoa mikasika ny endriky ny fiainana andavanandron'ireo mponina any. Inona no fomba fiaina mahazatra ny Malagasy?
Miankina amin'izay ametrahanao ny fanontanianao izany. Araka ny Banky Iraisam-pirenena, 90 isanjaton'ny vahoaka Malagasy no mampiditra latsaky ny 2$ Amerikana isanandro. Tahaka izany ny tsy fitovian-karena any Madagasikara hany ka tsy dia misy fomba fiaina mahazatra tena horesahina. Manazava io tsy fitoviana io  Randriamihaly, mpitoraka bilaogy any Madagasikara:
Ireo printsy lahy sy vavy no manana be indrindra. Aza gaga raha toa ka tahaka ny anganongano ny filazàny ny fiainan'izy ireny any Tanà. Mitoetra anatinà baboika tsy mety vakiana izy ireo. Voaaron'ireo mpiambina ny lapa lafo vidin'izy ireny, izay feno kojakoja mangirana sy fitaovana avo lenta. Mivoaka anatin'ny 4×4-ny izy ireo ary mandeha any aminà toerana izay izy ireo irery ihany no afaka miditra ao: fianarana Amerikana na Frantsay, toeram-pisakafoana, toeram-pilomanosana, toerana fakàna aina, toeram-pivarotana lehibe. . . . Metatra vitsy miala an'io, any Antananarivo, miaina anaty helo ny fianakavian'i Ernestine. Mifoha vao maraim-be izy mba hampiomanana ireo zanany ho any am-pianarana: misasa amin'ny rano mangatsiaka avy any anaty daba ary mihinana vary sosoa miaraka aminà hena kely natono alohan'ny handehanana tongotra ho any an-tsekoly. Ny sekoly, io no nofinofy fikiriny. Mino izy fa raha vitan'ireto zanany ny mahazo maripahaizana, na inona na inona izany, dia ho afaka hihoatra azy izy ireo any aoriana ary tsy hijaly isanandro tahaka azy. Mankany an-tranon'ireo mpampiasa azy izy ary manao ny asa rehetra ho azy ireo: ny sasa lamba, ny sasa lovia, ny fanadiovana, ny fantsakàna rano, ny fiambenana ny zaza, ny rehetra rehetra. Ary amin'ny alina, torovana izy tonga mody, ireto zanany efa matory. Izy tsy matory, raha mandry kosa ireto zanany, fa miambina ireo voalavo mety hanafika azy ireo amin'ny alina. Etsy andaniny, amin'ny fomba ahoana moa no ahazoana torimaso mamy rehefa olona efatra, dimy, na enina mihitsy aza no miara mandry anatinà efitra mirefy roa metatra ny sakany?
Noho izany dia tsy misy izany fiainana andavanandro mahazatra izany any Madagasikara; marina izany anatin'ny firenena na iza na iza saingy voakasika manokana ity farany, firenena izay naetry fotsiny ihany ho amin'izay kely indrindra tsy hahafaty azy ny sokajy antonony.
2) Ahoana ny fomba anononanareo ny anaran'ny filoha amin'izao fotoana?
Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana no filohan'i Madagasikara nanomboka ny Janoary 2014. Araka ny voalazan'ny The Guardian , ny anarany no lava indrindra amin'ireo anaran'ny mpitarika eran-tany ankehitriny. Tsy moramora ny manonona izany , na ho an'ny Malagasy aza. Raha sendra mihaona amin'ny filoha ianao, hevitra tsara kokoa ny mampiasa ny anaran'ny antokony Hery Vaovao  rehefa miantso azy toa izay hisisika hanonona diso ny anarany ka hiteraka fahasahiranana ara-diplômatika, na raha tsy izany dia omeo jiro entin-tànana izy mba hialàny amin'ireo fanahiany ny herinaratra mandavan-taona. Saingy raha tena mikiry ny hanonona ny anarany ianao, ito no fomba tokony hilazanao izany (eo amin'ny 0:09 ao anatin'ny lahatsary) :
3) Miketrika ny handeha tongotra mitety voary manerana ny nosy izahay. Inona no tokony ho fantatray mba tsy hahazoanay sampona?
Tanatin'ireo andro vitsivitsy lasa dia feno tantaram-pahantrana, olana ara-pahasalamana, tsy fandriam-pahalemana  sy halatra an-dalàmbe  ireo vaovao avy any Madagasikara. Mbola vaovao tsy afaka an-tsain'ny vahoaka ny tsiaro an'ireo vazaha roa (vahiny fotsy hoditra) niharan'ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny nosy Malagasy, Nosy Be. Etsy andanin'izany, fiainana tsy misy toa azy izay ataon'ireo mpizahatany sy ireo Malagasy isan-taona ny fandehanana an-tongotra mitety ny nosy.
Ny tazomoka no aretina mandrahona voalohany ny fahasalamana. Voasokajy anatin'ny faritra faha-3 ny firenena iray manontolo, izay midika fa afaka manohitra ny “chloroquine” (fanafody manohitra ny tazomoka, matetika fampiasa eran-tany na amin'ny fisorohana izany na amin'ny fitsaboana) ny selan'ity tazomoka fahita àny ity. Hita anatin'ny 90 isanjaton'ny faritr'i Madagasikara ny tazomoka. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hiarovan-tena : (avy amin'ny “Le Guide du Routard”, torolàlana fanta-daza mikasika ny fizahantany ho an'ireo mpizahatany miteny frantsay):
- Ilaina ny fanafody miaro amin'ny tazomoka.
– Amin'ny alina, mitafia akanjo izay manarona be indrindra ny vatanao. Tsara kokoa aza raha misy fanafody ireo akanjo (ohatra, ny akanjo nasiam-panafody miaro amin'ny tazomoka tahaka ny Insect Ecran® trempage). Osory menaka miaro amin'ny moka ny faritry ny vatana miseho, vantany vao milentika ny masoandro.
– Mampiasà lay misy odimoka.
Hita any Madagasikara ihany koa ny Bemangovitra sy ireo aretina hafa any an-tany mafana. Mitovy amin'ny any amin'ny firenen-kafa ihany ireo fepetra fototra hisorohana azy ireny. Raha ny mikasika ny tsy fandriampahalemana, tsy misy antontanisa ofisialy momba ny heloka nivoaka any Madagasikara, saingy tafapetraka anatin'ny feon'ny eritreritry ny olona izany, hany ka misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fizahantany . Manolotra ny heviny  i Mofo Lany, izay mipetraka any Antananarivo renivohitra:
Tsy misy herinandro mandalo ka tsy ahitana ireo gazety mitatitra herisetra niseho teto Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara. Samy iharan'ity tranga ity ny sokajy rehetra eo amin'ny fiarahamonina, miainga amin'ny ambony ka hatramin'ny ambany indrindra. Na ireo vahiny aza dia tsy afa-miala amin'izany. Fahita manokana bebe kokoa ny fandrobana mitam-piadiana.
4) Tokony hianatra teny Malagasy ve aho rehefa any Madagasikara? Raha eny, ahoana?
Raha ny tsara dia eny. Kanefa tahaka ny fianarana ny teny hafa na inona izany na inona, dia mitaky finiavana sy fahazotoana goavana ny teny Malagasy. Ary, sahala amin'ny teny hafa, manana ny lafiny mahamora azy sy ny tsy mahamora azy izy. Ireo lafitsarany:
Tsy misy fanavahana ny eo amin'ny lahy sy ny vavy: mitovy daholo
Tsy misy fanavahana ny isa: ny tokana sy ny maro dia sahala
Mari-potoana telo ihany no miasa: ny lasa, ny ankehitriny, ary ny hoavy, ary tsy miovaova isaky ny olona
Ary ho an'ireo fanamby kosa, dia mizara ny zava-niainany tamin'ny fianarana ny teny Malagasy  i Lilikely, amin'ny maha-vazaha (fiantsoana ny “vahiny” amin'ny teny Malagasy) azy:
- Misy olona vitsivitsy miteny Frantsay kely: be dia be ny any amin'ny tanàn-dehibe, saingy vitsy kosa ny any ambanivohitra. Midika izany fa moramora kokoa ho an'ny vahoaka ny mahazo izay tianao ambara, ary misy olona afaka manampy anao hatrany raha sahirana amin'ny fikarohana ny zavatra ilainao ianao. Noho izany dia tsy dia mila miezaka firy ianao, ary raha somary kamo, dia io no araraotina.
-Ny fitsipi-pitenenana. Toa tsotra ety am-piandohana. KANEFA… Ho an'ny tso-drafitra ihany izany. Ary, tsikaritra anefa fa, ny ankamaroan'ny Malagasy dia mampiasa ny mivadi-drafitra rehefa miresaka… izay sarotsarotra kokoa ny mifehy azy.
– Tena samy hafa be amin'ny anay ihany koa ireo tondro ara-kolontsaina sy ny fomba fanehoan-kevitry ny mponina aty.
– Ireo fiteny iavahan'ny faritra ihany koa dia mora manakivy anao rehefa mitsidika ianao.
Ahoana ny fomba hianarana? Ireto misy loharano vitsivitsy hianarana an'io teny io: ireo fototra  ao amin'ny mylanguages.org ho an'ny mpiteny Anglisy, ary ny Gasikara.net  ho an'ny miteny Frantsay, ny torolàlana amin'ny tafatafa  avy ao amin'ny Wikitravel ho an'ny miteny Anglisy ary ny Assimile  ho an'ny miteny Frantsay ary ny fanarahana fampianarana manokana ho an'ny tena  (raha ilaina) sy ny fanazavana ireo marim-potoana .
5) Afrikana, Aziatika sa hafa ireo vahoaka Malagasy?
Betsileo, Madagasikara, 1908 CC-BY-2.0
Ah, ilay fanontaniana tsy mety miala ! Ity no fotoana hiresahantsika ireo fanontaniana mampiady hevitra be mikasika an'i Madagasikara. Azo ihany ity fanontaniana manokana ity satria eo anelanelan'i Afrika sy Azia mihitsy no misy ilay firenena ary maro karazana tokoa ny mponina ao aminy. Ara-drariny araka izany ilay fanontaniana. Ny olana dia ny adihevitra mitranga aorian'io fanontaniana io–matetika dia mivilana ho resaka tsy loa-body  maneho fanavakavahana sy fitsaratsaram-poana  amin'ny endrika samihafa ny adihevitra momba io fotokevitra io. Raha tena tia karokaroka ianao ka mahay mamaky teny Frantsay, i Dominique Ranaivoson, mpampianatra mpikaroka sady manam-pahaizana amin'ny literatiora Malagasy, dia nanoratra bebe kokoa mikasika io fotokevitra  io amin'ny teny Frantsay. Iray amin'ireo zavatra tokony ho fantatra ny fisianà fokon-drazana 18 any Madagasikara, izay ahitàna vahoaka avy any Afrika, Azia ary Arabia. Ny zava-misy iray hafa dia ny fisianà karazanà fanavakavahana miafinkafina eo amin'ireo vondrona Malagasy samy hafa ireo.
Vézo Mpanarato, sary an'i Jean-Louis Vandevivère CC-BY-2.0
6) Maninona ny vahoaka Malagasy sasany no “mamadika ireo taolana” (famadihana) an'ireo havana akaiky efa maty?
Ah, ilay fanontaniana mampiady hevitra  iray hafa! Ny famadihana, na “famadihana ireo taolana,” dia fomban-drazana eo amin'ny sehatry ny fandevenana hanomezam-boninahitra ireo razambe. Ity misy fanazavana io fombafomba io  omen'i Lay avy any Antananarivo:
Ny razana dia mety hiseho amin'ny iray amin'ireo taranany anatinà nofy na tromba, ka mitaraina ho mangatsiaka ary ho setrin'io dia manome toky ny hampita tsodrano amin'ny fiainana andavanandron”ireo taranany. izany no antony mahatonga ny Malagasy mamerina mamoha ny fasan'ireo fianakaviana efa maty ka manolo ny lambamena mandrakotra ny sisan'ilay maty. Fotoana io ho an'ny fankalazana goavambe, ny fandihizana sy ny fisotroana.
Manazava ny mampiavaka ity fomban-drazana ity eo amin'ny sehatry ny kolontsaina Malagasy i Soahary:
Saika tsy misy toa azy ny fifandraisana misy eo amin'ny vahoaka Malagasy sy ny fahafatesana ary ny fianakaviana maty. Mandray ireo razambenay ho mpiahy anay izahay, ary araka izany, dia tsy tena lasa izany izy ireo. Manome voninahitra azy ireo mateitetika izahay mandritra ny fotoana iray amin'ny alàlan'ny famonosana lamba vaovao ny tenan'izy ireo.
Manampy i Hemerson Andrianetrazafy, mpampianatra mpikaroka ny sivilizasiôna any amin'ny Anjerimanontolon'Antananarivo, fa:
Raha ny marina, ny famadihana no fombafomba hahatongavan'ny vatana mangatsiakan'ny fianakaviana iray ho eo amin'ny toeran'ny razana. Hetsika lehibe tokoa io eo amin'ny sehatry ny fiainana ara-panahin'ny Malagasy, satria tsy ny maty rehetra no avy dia tonga ho razana. Ho an'ny Malagasy dia tsy fahalevonana ny fahafatesana, fa dingna iray mitondramankany amin'ny toerana maha-razana. . . Tsy maty fa lasan-ko razana, (volona amin'ny endriny hafa izy ireo) mijoro ho mpanelanelana ny velona sy ny zanahary, ireo andriamanitra.
Vahoaka Malagasy Kristianina maro no nanindry fa mifangarika amin'ireo fepetra araka ny Baiboly ity fombafomba ity. Miha-mhena araka izany ny fampiharana ny famadihana noho io antony io, ankoatra ny fidangan'ny fandaniana amin'ilay lanonana.
7) Nahoana no fahita matetika any Madagasikara ny didi-poitra / famoràna na hasoavana?
Fomban-drazana iray hafa any Madagasikara ny famoràna ireo zazalahy kely alohan'ny roa taonany.
Fotoana iray koa ahafahana manao lanonana izany ho an'ny fianakaviana. Tsy mifandray aminà fomba ara-pinoana izany any Madagasikara, saingy tsy ialàn'ny adihevitra. Manazava ny antony nahatonga ny zanany lahy noforaina  i Ariniaina:
Fa maninona no manao io fombafomba io? ‘Ndeha hanamarina ny tenako aho amin'ny filazàna fa noho ny antony ara-pahasalamana izany. Fa hoe misy loto mety tafajanona ao anatin'ny tsitsy , izay midika fa tsy maintsy hatao hasoavana ihany izy any aoriana noho ireo olana ara-pahasalamana aterak'izay. Ary amin'izany fotoana izany dia lehibe kokoa izy ka hahatsapa kokoa ny hirifiry, ka hanenina aho noho ny tsy nanaovana ny famorana aloha kokoa. Sainga raha dinihana lalina, ny ara-kolontsaina ve no mandresy? izay tsy voafora, dia tsy raisina ho “tena lehilahy”.
8) Inona no fifandraisana amin'i Madagasikara, ilay firenena, sy “Madagascar”, ilay sarimiaina?
Tsy misy. Raha ny marina, zavatra roa: 1) Tena nitsinjaka tamin'ny “I Like to Move It, Move It” ireo toeram-pandihizana amin'ny alina any Madagasikara tamin'ireo taona 90. 2) Nanolotra fanampiana mitentina $500 000  Amerikana ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa, “Conservation Internationale” ho fampiroboroboana ny fizahantany mitandro ny zavaboary any Madagascar  i Jeffrey Katzenberg, talen'ny “Dreamworks”, ilay orinasa namokatra ireo fizarana telon'ny horonantsary “Madagascar”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/29/64406/
 nosy fahefatra goavana indrindra eran-tany eo amin'ny habe: http://www.infoplease.com/ipa/A0001783.html
 Valérie Trierweiler: https://en.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Trierweiler
 Manazava io tsy fitoviana io: http://randriamialy.mondoblog.org/2014/08/12/chez-moi-cest/
 The Guardian: http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/03/hery-rajaonarimampianina-longest-named-leaders-world
 moramora ny manonona izany: http://www.slateafrique.com/428011/madascar-difficulte-prononciation-noms-malgaces
 Hery Vaovao: http://www.heryvaovao.com/
 fanahiany ny herinaratra : https://globalvoicesonline.org/2014/09/07/what-if-75-of-cities-were-deprived-of-electricity-by-design/
 tsy fandriam-pahalemana: https://globalvoicesonline.org/2012/09/25/madagascar-struggles-to-control-domestic-instability/
 halatra an-dalàmbe: http://www.irinnews.org/report/95892/analysis-madagascar-s-unforgiving-bandit-lands
 torohevitra vitsivitsy hiarovan-tena: http://www.routard.com/guide/madagascar/948/sante_et_securite.htm
 misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fizahantany: http://fr.canoe.ca/voyages/nouvelles/archives/2013/11/20131112-095057.html
 ny heviny: http://www.routard.com/forum_message/2904926/est_il_dangereux_d_aller_a_madagascar_actuellement.htm#
 fianarana ny teny Malagasy: http://lilikely.canalblog.com/archives/2005/04/02/418799.html
 ireo fototra: http://mylanguages.org/learn_malagasy.php
 torolàlana amin'ny tafatafa: http://wikitravel.org/en/Malagasy_phrasebook
 fampianarana manokana ho an'ny tena: http://apprendre-le-malgache.blog.fr/
 fanazavana ireo marim-potoana: http://malagasy4all.blogspot.ca/2012/03/malagasy-tenses-learn-malagasy.html
 ilay fanontaniana tsy mety miala: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0037-8984_1909_num_10_1_8033
 resaka tsy loa-body: http://www.tananews.com/2013/03/les-malgaches-des-africains-en-puissance-qui-signorent/
 nanoratra bebe kokoa mikasika io fotokevitra: http://www.sielec.net/pages_site/DESTINATIONS/AFRIQUE/Ranaivoson_malgaches/Ranaivoson_malgaches_1.htm
 fanontaniana mampiady hevitra: http://forum.serasera.org/forum/message/m466bd49090972
 fanazavana io fombafomba io: http://randriamialy.mondoblog.org/2014/06/13/nos-sauvageries-malgaches-top-10/
 mampiavaka ity fomban-drazana ity : http://ranouraii.wordpress.com/2012/05/04/famadihana-exhumation-rituelle-ou-retournement-des-morts/
 Manampy : http://agir.avec.madagascar.over-blog.com/article-famadihana-la-mort-est-une-fete-118777522.html
 antony nahatonga ny zanany lahy noforaina: http://ariniaina.mondoblog.org/2013/08/15/je-suis-malgache-jai-fait-circoncire-mon-fils/
 $500 000: http://online.wsj.com/news/articles/SB111533904631326408
 fampiroboroboana ny fizahantany mitandro ny zavaboary any Madagascar: http://la-confidential-magazine.com/living/articles/conservation-international-protects-mother-earth